इतिहासकै कडा दोहोरी इन्द्रेणीमाः पशुपति शर्मा र जेरीले यस्तो गीत गाउदा टिका सानु हासेरै मरिन् ! (हेर्नुहोस भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > इतिहासकै कडा दोहोरी इन्द्रेणीमाः पशुपति शर्मा र जेरीले यस्तो गीत गाउदा टिका सानु हासेरै मरिन् ! (हेर्नुहोस भिडियो)
माघ ०८, काठमाण्डाैं । पशुपति शर्मा र जेरीले इन्द्रेणीमा दोहोरी गाउदा दर्शक नै हासेर एकदमै रमाएका छन् । यस्तो खालको दोहोरीले पहिलो पटक इन्द्रेणीमा हलचल नै मच्चाएको कुरा विभिन्न प्रतिक्रियाको आधारमा हामी सबैलाई थाहा भएको छ ! पशुपति शर्मा र जेरी ले एकले अर्कालाई तँ तँ र म म गर्दै गाएको दोहोरि गीतले येतिखेर बजारमा भने तहल्का नै मच्चाउने आंकलन समेत गरिएको छ ! उक्त कार्यक्रममा चर्चित लोक दोहोरी गायिकाहरू थिए ।
इन्द्रेणी कार्यक्रममा चर्चित गायक पशुपति र जेरीका साथमा लाइभ दोहोरी गायिका टिका सानु, संचालक कृष्ण कंडेल र अन्य कलाकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगै सेना पनि आउने बताएका छन् ।
पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले नयाँ बानेश्वरमा राखेको सी चिनफिङ भाग–१ र २ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा नेता पोखरेलले एमसीसी सँगै अमेरिकी सेना नेपाल आउने बताए । उनले भने, “एमसीसी परियोजनाको सुरक्षाका नाममा नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, त्यसैले मैले विरोध गरेको हुँ ।”
अमेरिकी दूतावासले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको दश तथ्यले एमसीसी सँग जोडिएको प्रश्नको जवाफ नदिएको उनले बताए । इण्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्दै दूतावासले दश तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
“यति ठूलो परियोजना सञ्चालनका लागि डीपीआर किन छैन ?” पोखरेलले भने, “डीपीआर बिना चल्ने परियोजनाको रहष्य छ ।”उनले चीन सरकारले अगाडि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स् (बीआरआई) को असफल बनाउन एमसीसी आएको नेता पोखरेलले बताए ।
चीनबाट ल्याउन लागिएको रेलका लागि भइरहेको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई प्रभावमा पार्नेगरी ट्रान्समिसन लाइनको कार्यक्रम ल्याउनुको कारण अमेरिकाले नखुलाएको उनको भनाइ छ । रेल ल्याउन नदिनकै लागि एमसीसीमा सर्तहरु अमेरिकाले तेस्र्याएको पोखरेलको भनाइ छ ।
“एमसीसी संसदबाट पारित हुने तर, संशोधन संसदले गर्न नपर्ने प्रावधान राखिनु, एमसीसी सँग जोडिएका विषयमा फौजदारी अभियोग नलाग्ने र परियोजना अमेरिकाले चाहे तोड्न सक्ने व्यवस्थाले देशको सार्वभौमता रहँदैन”, पोखरेलले भने ।
अस्ट्रेलियामा किन हुदैछ यस्तो प्राकृतिक विपत्ति? फेरि आगो दन्किएपछि राजधानीसहित कयौं स्थान खाली गरिदै…
अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प पाकिस्तान आउने खबरले भारतमा यस्तो खैलाबैला… माेदी तनावमा!
इन्द्र अर्यालले गरे पर्दाफास: बम दिदीबहिनी नै दोषी – साबित्रीलाई चुनौती (भिडियो)